Faa'iidooyinka - Shineon Technology Co., Ltd.
Iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda horumarsan fosfooraska iyo teknoolojiyada baakadaha, Shineon waxay soo saartay saddex alaabood oo taxane LEDs oo buuxa ah. Teknolojiyada ayaa noo ogolaaneysa in aan injineernimo oo jaangoynno SPD qaybinta awoodda korantada ee cad cad, si aan u helno il iftiin fiican oo ku habboon codsiyada kala duwan.
Cilmi-baaristu waxay muujisay isku xirnaanta u dhexeeya midabka ilaha iftiinka iyo wareegga wareegga bini-aadamka. Laabashada midabka ee baahida deegaanka ayaa noqotay mid aad iyo aad muhiim ugu ah codsiyada nalalka tayada sare leh.
Dhererka dhererka UV wuxuu u dhexeeyaa 10nm ilaa 400nm, wuxuuna u kala baxayaa dherer kala duwan oo kala dherer ah: qalooca uv barta madow ee (UVA) ee 320 ~ 400nm; Erythema ultraviolet rays ama daryeel (UVB) 280 ~ 320nm; Nadiifinta Ultraviolet (UVC) ee 200 ~ 280nm band; Si loo yareeyo qalooca ultraviolet (D) ee dhererka 180 ~ 200nm.
Isticmaalka Shineon ee tiknoolajiyada baakadka hermetic ee sare, wuxuu naqshadeeyaa laba taxane oo ah isha iftiinka LED ee beeraha. Mid waa silsiladda xirmooyinka 'monochrome' iyadoo la adeegsanayo buluug iyo casaan (3030 iyo 3535 taxane ah), tan kalena waa fosfooras taxane ah oo ku farxaya buluug buluug ah (3030 iyo 5630 taxane). Tixraaca iftiinka 'Monochromatic light' wuxuu leeyahay faa iidada waxtarka sare ee qulqulka photonka
Maado cusub oo nano ah, dhibcaha kumbuyuutareedka (QDs) waxay leeyihiin waxqabad aad u wanaagsan sababtoo ah cabirkooda. Qaabka maaddadaani waa mid wareegsan ama qaab-goos goos ah, dhexroorkeeduna wuxuu u dhexeeyaa 2nm ilaa 20nm. QDs waxay leeyihiin faa iidooyin badan, sida kaladuwanaanta xamaasada ballaaran, muuqaalka qulqulka cidhiidhiga, dhaqdhaqaaqa weyn ee 'Stokes', cimri dherer dhaadheer oo wanaagsan iyo wanaag
Iyadoo la horumarinayo tiknoolajiyada muujinta, warshadaha TFT-LCD, oo xukumayay warshadaha bandhigga muddo tobanaan sano ah, ayaa si weyn loo wajahay. OLED waxay gashay wax soo saar balaaran waxaana si balaaran looga qaatay dhanka telefonada casriga ah. Teknoolojiyada soo ifbaxaya sida MicroLED iyo QDLED sidoo kale waa ay socdaan.